ဒီရာသီဖွားနှစ်ခုဟာ ဥာဏ်ရည်အမြင့်မားဆုံးပဲလို့ နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေလေ့လာတွေ့ရှိ…😎 – Trend.com.mm
တကယ်တော့ ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီမှာ အားကောင်းတာလည်းရှိသလိုအားနည်းတာလည်းရှိကြပါတယ်။ရာသီခွင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သာတာနာတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ ဒီရာသီနက္ခတ်ဖွားနှစ်ခုဟာ တစ်ခြားရာသီဖွားတွေထက် ဥာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလို့တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။မိဿ၊ပြိဿ၊မေထုန်၊ကရကဋ်၊သိဟ်၊ကန်၊တူ၊ဗြိစ္ဆာ၊ဓနု၊မကာရ၊ကုံ၊မိန် စသဖြင့်ရာသီခွင် ၁၂ခုရှိတဲ့အနက် ကုံရာသီဖွားနဲ့ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေဟာ ဥာဏ်ပညာအမြင့်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ကိုယ့်ရာသီဖွားက ဘာလဲဆိုတာတော့ သေချာသိကြတယ်ဟုတ်! 😅
ဥာဏ်ပညာအရတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါ ဒီရာသီဖွားနှစ်ခုက ထိပ်ဆုံးရောက်နေပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဥာဏ်ကောင်းပုံက နှိုင်းယှဉ်ဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်။ကုံရာသီဖွားတွေကျတော့ ဦးနှောက်ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ Type ဖြစ်ပြီး ခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်က ထိပ်ဆုံးမှာပါ။ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေကတော့ ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွမ်းကျင်မှုအမြင့်ဆုံး Type မျိုးပါ။ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကောင်းမွန်တယ်။တစ်ခြားသူတွေဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာကအစလိုက်ကြည့်ပြီး သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပေးတဲ့သူမျိုးပါတဲ့။ဒီရာသီဖွားနှစ်ခုက တစ်မျိုးစီမှာ အထူးချွန်ဆုံးစီဖြစ်နေတာပါပဲ။
တစ်ခြားရာသီဖွားတွေအရပြောရမယ်ဆိုရင် မေထုန်ရာသီဖွားတွေဟာ ဥာဏ်ရွှင်ပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားကောင်းသလို တူရာသီဖွားတွေကတော့ဘေးနားကလူတွေပျော်ရွှင်ဖို့ခံစားချက်ကိုပိုပြီးဦးစားပေးအာရုံစိုက်တတ်သူတွေပါတဲ့။ကရကဋ်ရာသီဖွားနဲ့ မိန်ရာသီဖွားဟာလည်း တစ်ခြားသူတွေကိုဦးစားပေးတတ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သလို သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြိဿ၊ကန်နဲ့မကာရရာသီဖွားတွေဟာဆိုရင် စိတ်ရှည်မှုနေရာမှာတစ်ဖက်ကမ်းခပ်ပါ။တစ်ခြားသူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အစအဆုံးကူညီပေးတတ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် မကာရရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်မရောက်မချင်း ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲကြုံကြုံစိတ်ရှည်သည်းခံပြီးလုပ်ဆောင်ကြလို့ မကြာခဏဆိုသလို အောင်မြင်မှုတွေရတတ်ကြပါတယ်။ဓနု၊သိဟ်၊မြိဿရာသီဖွားတွေကတော့ စွမ်းအားတွေကိုစုဆောင်းပြီးအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားသူတွေပါ။သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာထိ အခက်အခဲတွေကြုံလည်း အဲ့ဒါတွေကိုအားယူပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဖြေရှင်းတတ်ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာဖြေရှင်းတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဥာဏ်ရည်အကောင်းဆုံးရာသီဖွားတွေဆိုရင်တော့ကုံရာသီဖွားနဲ့ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေက ထိပ်ဆုံးရောက်နေပါတယ်။
အိုင်ကတော့ ကုံရာသီဖွားပါ 😎Trend ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ကုံရာသီဖွားနဲ့ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားလေးတွေပါကြလား?
ဒီရာသီခှငျနှဈခုမှာမှေးဖှားတဲ့သူတှဟော ဉာဏျအကောငျးဆုံးသူတှလေို့ နက်ခတျဗဒေပညာအရ လလေ့ာတှရှေိ့…
တကယျတော့ရာသီခှငျတဈခုခငျြးစီမှာ အားကောငျးတာလညျးရှိသလိုအားနညျးတာလညျးရှိကွပါတယျ။ရာသီခှငျတဈခုနဲ့တဈခု သာတာနာတာ
မရှိသလောကျပါပဲ။ဒါပမေဲ့ နက်ခတျဗဒေပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရတော့ ဒီရာသီနက်ခတျဖှားတှဟော တဈခွားရာသီဖှားတှထေကျ
ဉာဏျပညာအကောငျးဆုံးလို့တှရှေိ့လာခဲ့ရပါတယျ။မိဿ၊ပွိဿ၊မထေုနျ၊ကရကဋျ၊သိဟျ၊ကနျ၊တူ၊ဗွိစ်ဆာ၊ဓနု၊မကာရ၊ကုံ၊မိနျ စသဖွငျ့ရာသီခှငျ ၁၂ခုရှိတဲ့
အနကျ ကုံရာသီဖှားနဲ့ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှဟော ဉာဏျပညာအမွငျ့ဆုံး၊အကောငျးဆုံးပါတဲ့။ကိုယျ့ရာသီဖှားက ဘာလဲဆိုတာတော့သခြောသိကွတယျဟုတျ!
ဉာဏျပညာအရတှကျခကျြကွညျ့တဲ့အခါ ဒီရာသီဖှားနှဈခုက ထိပျဆုံးရောကျနပေါတယျတဲ့။ပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဉာဏျကောငျးပုံက နှိုငျးယှဉျဖို့လညျးခကျခဲပါတယျ။
ကုံရာသီဖှားတှကေတြော့ ဦးနှောကျဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ Type ဖွဈပွီး ခှဲခွားစိတျဖွာတဲ့စှမျးရညျနဲ့ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျတဲ့စှမျးရညျက ထိပျဆုံးမှာပါ။
ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှကေတော့ ခံစားခကျြနဲ့ပတျသကျလာရငျကြှမျးကငျြမှုအမွငျ့ဆုံး Type မြိုးပါ။ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှဟော တဈခွားသူတှရေဲ့ 
ခံစားခကျြကို နားလညျကိုယျခငျြးစာတတျပွီး တဈခွားသူတှထေကျပိုပွီးပေါငျးသငျးဆကျဆံမှုကောငျးမှနျတယျ။တဈခွားသူတှဘောလိုအပျနလေဲဆိုတာကအစ
လိုကျကွညျ့ပွီး သူတို့အတှကျအကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈပေးတဲ့သူမြိုးပါတဲ့။ဒီရာသီဖှားနှဈခုက တဈမြိုးစီမှာ အထူးခြှနျဆုံးစီဖွဈနတောပါပဲ။
တဈခွားရာသီဖှားတှအေရပွောရမယျဆိုရငျ မထေုနျရာသီဖှားတှဟော ဉာဏျရှငျပွီးစဉျးစားတှေးချေါမှုအားကောငျးသလို တူရာသီဖှားတှကေတော့
ဘေးနားကလူတှပြေျောရှငျဖို့ခံစားခကျြကိုပိုပွီးဦးစားပေးအာရုံစိုကျတတျသူတှပေါတဲ့။ကရကဋျရာသီဖှားနဲ့ မိနျရာသီဖှားဟာလညျး တဈခွားသူတှကေိုဦးစား
ပေးတတျပွီး တဈခွားသူတှကေိုပြျောရှငျအောငျဆောငျရှကျပေးတတျသလို သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး ပြျောရှငျအောငျနတေတျသူတှဖွေဈပါတယျ။
ပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ မကာရရာသီဖှားတှဟော သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျမရောကျမခငျြး ဘယျလိုအခကျအခဲပဲကွုံကွုံစိတျရှညျသညျးခံပွီးလုပျဆောငျ
ကွလို့ မကွာခဏဆိုသလို အောငျမွငျမှုတှရေတတျကွပါတယျ။ဓနု၊သိဟျ၊မွိဿရာသီဖှားတှကေတော့ စှမျးအားတှကေိုစုဆောငျးပွီးအောငျမွငျမှုရအောငျ
ဒီလိုမြိုးရာသီခှငျတဈခုခငျြးစီမှာ ကိုယျပိုငျအားသာခကျြအားနညျးခကျြတှရှေိကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဉာဏျရညျအကောငျးဆုံးရာသီဖှားတှဆေိုရငျတော့
ကုံရာသီဖှားနဲ့ ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှကေ ထိပျဆုံးရောကျနပေါတယျ။
အိုငျကတော့ ကုံရာသီဖှားပါ Trend ပရိသတျကွီးထဲမှာရော ကုံရာသီဖှားနဲ့ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားလေးတှပေါကွလား?